Oshiye emaphoyiseni usenebhizinisi lokuhlanza - Ilanga News
Home Izindaba Oshiye emaphoyiseni usenebhizinisi lokuhlanza
Oshiye emaphoyiseni usenebhizinisi lokuhlanza
Ukhuthaza abesifazane ukungabi ngokhangezile
ABANTU abebenza uqeqesho lokwakha okhaphethi olwenziwa yiyona iSparklean.
AKAZISOLI nakancane ngokulaxaza umsebenzi wokuba yiphoyisa abesewenze iminyaka owesifazane waKwaNongoma osenebhizinisi elithi yena lokwenza imikhiqizo eyahlukene yokuhlanza endlini, aphinde afundise nabanye besifazane ukwenza umsebenzi wezandla.
UNkz Nombuso Dlamini (35) osezinze eThekwini, usevule inkampani ebizwa ngeSparklean eyenza imikhiqizo yokuhlanza.
Phakathi kwemikhiqizo yakhe kubalwa insipho yokuwasha izitsha, eyokuthambisa izingubo zinuke kahle (fabric softer), eyokuhlanza indlu, iPine Gel, eyokuhlanza izimoto ne-sanitiser esiza kakhulu ukuhlanza izandla ukubulala amagciwane kubalwa nelihlalise lubhojozi umhlaba wonke, iCorona.
UNkz Dlamini uthi uqale leli bhizinisi ngoba efuna ukuba nomkhiqizo othi yena ozosiza izingane zakhe ngisho engasekho emhlabeni, zikwazi ukuphila ngebhizinisi lakhe.
Uthi kasikho isizathu sokuthi kube khona abesifazane abahlala bagoqe izandla ekubeni amathuba okuzisebenza esemaningi esikhathini sanamuhla.
UNCELE ULWAZI KOWESIFAZANE WASEGOLI
UNkz Dlamini uthi ulaxaze umsebenzi wobuphoyisa ngo-2017, kwazise ubesekhathele ukwenza umsebenzi wokuhubhana nezigebengu ekubeni nomholo unganyuki okutheni.
Uthi yingakho ebone kungcono ukuba aziqalele ibhizinisi lakhe, asize nabanye besifazane
abangenayo imfundo yasemanyuvesi. “Lo msebenzi ngawubona komunye wesifazane waseGoli ngase ngicela ukuba angicobelele ngolwazi. Nebala wangisiza, wathi mangiqoqe abantu abawu-10 azosifundisa nabo.
“Ngempela kwaba njalo, ngaqala ngasebenza. Amakhasimende okwamanje engiwathengisela imikhiqizo yami ngabasemagalaji ahlanza izimoto, yizitolo, yizinkulisa nezikole ezingomakhelwane.
“Ezinkundleni zokuxhumana nakhona nginawo amakhasimende njengoba eyaye abone imikhiqizo yami bese efaka ama-oda,” kusho uNkz Dlamini.
UTHI KUSHIBHILE UKUQALA LELI BHIZINISI
Kubantu abafisa ukufunda, uthi amakilasi aba khona zonke izinsuku. Umuntu ukhokha u-R800 ukufunda lonke lolu lwazi bese ethola nebhuku elinazo zonke izinhlobo zemikhiqizo elisuke lizo-msiza uma esephuma eyoziqalela ibhizinisi lakhe.
“Esikhathini samanje akekho umuntu okufanele athembele emholweni womqashi kungabi khona lutho olunye alwenzayo eceleni.
“Abantu mabasukume bazofunda amakhono. Abantu bazomangala ukuthi lezi zinto zokuhlanza abazithenga ngo-R30 uma bezenzela, bangonga kangakanani njengoba iningi lezinto okutha-kwa ngazo le mikhiqizo lingambi eqolo.
“Mina ngiqale ngo-R700 ngathenga izinto zokwenza emuva kwalokho kangiphindanga ngakhipha ephaketheni lami ngoba umkhiqizo ubusuzithenga.
“Ngaphandle kokwenza le mikhiqizo yokuhlanza indlu, ngiphinde ngifundise abantu ukwenza okhaphethi,” kusho uNkz Dlamini.
UNkz Dlamini okwamanje usazibambele yena ebhizinisi lakhe kodwa uma enama-oda amaningi kakhulu, kukhona abanye besifazane ayaye abaqashe ukuba bazomlekelela ukwenza umsebenzi osuke udingeka.
Uthi kumanje umatasa uzama ukwenza umkhiqizo wakhe ukuba ungene nasezitolo ezinkulu njengoba bekufanele uphasiswe kuqala ngaphambi kokuba awufake kuzona.
Nakhu okunye ngemikhiqizo yakhe:
* Yenziwe ngemikhiqizo engalimazi ezandleni.
* Iyatholakala ngokuyi-oda kuyena ekhasini lakhe leFacebook elithi: Nombuso Dlamini
* Uqeqesho lusavaliwe njengoba abantu
beyalelwe ukuba bagonqe emakhaya izinsuku eziwu-21 ngenxa yegciwane i-corona.
* I-online training iyaqhubeka kulabo abesebevele bekhokhile kanti abajahe ulwazi bangabha-lisa online.
Previous articleKuqagulwa inhlupheko enkulu ezayo kuleli
Next articleKucaciswa ngabafanele ukufaka i-mask